Sciences soLuntu U ku velisa
Ukuncitshiswa kweendleko ngumgaqo oyisisiseko osetyenziswa ngabavelisi ukuchonga ukuxutywa kwabasebenzi kunye nenkunzi eyenza ukuveliswa ngexabiso eliphantsi. Ngamanye amazwi, yintoni enye indlela echanekileyo yokuhanjiswa kweempahla kunye neenkonzo eza kubakho ngexesha lokugcina izinga elifunayo lomgangatho.
Isicwangciso-mali esibalulekileyo, kubalulekile ukuqonda ukuba kutheni ixabiso lokunciphisa ibalulekile kwaye lisebenza njani.
Ukunyanzeliswa koMsebenzi woPhuhliso
Ekuhambeni kwexesha , umlimi unakho ukulungelelanisa kuzo zonke iinkalo zemveliso - bangaphi abasebenzi abakuqeshwe, ubuninzi befektri ukuba babe neyiphi i-teknoloji yokuyisebenzisa, njalo njalo. Kwimimiselo ethile yezoqoqosho, umlimi unokuhluka phakathi kokubakho kwemali kunye nenani labasebenzi elisebenzisayo ngexesha elide.
Ngoko ke, umsebenzi wokuvelisa ixesha elide unemivuzo engama-2: inkunzi (K) kunye nabasebenzi (L). Kule tafile ehlinzekwe apha, q umele ubungakanani bemveliso eyenziwe.
Iindlela zokwenza iNkqubo
Kwimashishini amaninzi, kukho iindlela eziliqela apho umlinganiselo othile wokuvelisa ungadalwa. Ukuba ishishini lakho lenza i-sweaters, umzekelo, unokuvelisa izikratshi mhlawumbi ngokuqesha abantu kunye nokuthenga izilingo zokudibanisa okanye ngokuthenga okanye ukurenta umatshini odibeneyo.
Ngokomgaqo-qoqosho, inkqubo yokuqala isebenzisa ubuncinci bemali kunye nenani elikhulu labasebenzi (oko kukuthi "i-labor force intensive"), kanti inkqubo yesibini isebenzisa ubuninzi benkunzi kunye nenani elincinci labasebenzi (oko kukuthi "ixabiso elikhulu "). Unokukhetha inkqubo ephakathi kwezi zi-2 ezigqithiseleyo.
Ngenxa yokuba kukho iqela leendlela ezahlukahlukeneyo zokuvelisa ubungakanani obuninzi bokuvelisa, inkampani inganquma njani ukuxuba umxhesho kunye nabasebenzi ukuba basebenzise? Akumangalisi ukuba iinkampani ngokubanzi ziya kufuna ukukhetha intlangano evelisa ubuninzi obunikwe umgangatho kwixabiso eliphantsi.
Ukugqiba iMveliso engabizi
Inkampani inokuyithatha njani isigqibo sokuba yintoni enye incinci?
Enye inketho iya kuba ukubeka yonke imimandla yabasebenzi kunye nenkunzi eyayiza kuvelisa ubuninzi bemveliso, ukubala iindleko nganye kwezi zikhetho, kwaye ukhethe ukhetho kunye neendleko eziphantsi. Ngelishwa, le nto ingaba nzima kakhulu kwaye ngezinye iimeko akunakwenzeka.
Ngenhlanhla, kukho imeko elula ukuba iinkampani zingasebenzisa ukuchonga ukuba ingxube yabo yexabiso kunye nezabasebenzi iyanciphisa iindleko.
Umthetho wokunciphisa indleko
Iindleko zancitshiswa kumanqanaba omsebenzi kunye nabasebenzi njengokuba umkhiqizo omncinci wezabasebenzi ohlukaniswe ngumvuzo (w) ulingana nomkhiqizo omncinci wenkcitho ehlulwe yintengo yokuqashisa yemali (r).
Okungakumbi nge-intuitively, unokucinga ngeendleko ezincitshiswayo kwaye, ngokwandiswa, umveliso uphumelele kakhulu xa umrhumo owongezelelweyo kwi-dollar esetyenzisiweyo nganye kwiimfuno kufanayo. Ngokwemigaqo engaphantsi komthetho, ufumana "ibha ye-buck yakho" efanayo kwi-input. Le fomyula ingasongezwa ukuba isebenzise kwimveliso yokuvelisa eneziphumo ezingaphezulu kwe-2.
Ukuqonda ukuba kutheni le mithetho isebenza, makhe siqwalasele imeko engekho indleko ekunciphiseni kwaye ucinge ngesizathu sokuba kunjalo.
Xa iimpembelelo zingekho kwi-Balance
Makhe siqwalasele imeko yokuvelisa, njengoko kuboniswe apha, apho umkhiqizo omiselweyo wezabasebenzi ohlukaniswe ngumvuzo mkhulu kunemveliso engaphantsi kwemali ehlulwe yixabiso lokuqashisa.
Kule meko, idoli nganye echitha kwi-laboratories yenza umkhiqizo ophezulu ngaphezu kwedola ngalinye elichithwe kwi-capital. Ukuba unguye le nkampani, ngaba awufuni ukutshintsha izibonelelo ngaphandle kwenkampani enkulu kunye neyabasebenzi? Oku kuya kukuvumela ukuba uvelise umgangatho ophezulu kwixabiso elifanayo, okanye, ngokulinganayo, ukuvelisa ubunani obufanayo bemveliso ngexabiso eliphantsi.
Ngokuqinisekileyo, imbono yokunciphisa umkhiqizo omncinci uchaza ukuba akukufanelekanga ukuqhubeka ukuguquka ukusuka kwi-capital ukuya kusebenze ngonaphakade, ekubeni ukwandisa ubuninzi bezabasebenzi kuya kunciphisa umkhiqizo ongaphantsi komsebenzi, nokunciphisa ubuninzi benkunzi esetyenzisiweyo kuya kwandisa umda yemveliso yemali. Lo mzekelo uchaza ukuba ukutshintshwa kwigalelo kunye nemveliso engaphantsi kwemali nganye ekugqibeleni kuza kufakwa iziphumo kwi-balance-minimization balance.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba igalelo alinayo imveliso ephakamileyo ukuze kube nomkhiqizo ophezulu kumdola, kwaye kungenokwenzeka ukuba kulungele ukutshintshela kwiziphumo ezingakhange zivelise kwimveliso ukuba ezo ziphumo zibiza kakhulu.
Yintoni Ubudlelwane phakathi koMyinge kunye neNdleko yoLungiso?
Imali engenayo kunye neCandour Demve
Izinto EziMathandathu zokuziqonda malunga ne-2016 yonyulo
ILizwi loSuku - i-fushigi
Ukufuna ii-Exoplanets: I-Kepler Mission
Narodnaya Volya (Iintando Zabantu, iRashiya)
Indlela Yokusebenzisa Ngakumbi "Funda IsiGrazil IsiGama Ngomxholo" Izifundo
Indlela yokubala i-Powerball Probabilities
Iikhokeli zehlabathi kwi-Arab Spring Era
Imbali yecinga likaMichelson-Morley
UJohn Tyler - UMongameli weshumi waseUnited States
Hamba Kulula Kusebenzisa Abakhakisayo Bentlanzi kwiBas